musha UNITED UMAMBO FOOTBALL STORI Vatambi Vanotamba Yevatambi Demarai Grey Childhood Story Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBhola Genius iyo inozivikanwa zvikuru nezita rokuti "Gireyi". Our Demarai Grey Childhood Story pamwe nes Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvika panguva. Kuongorora kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, mhuri yemhuri, nyaya yehupenyu pamberi pezita, kusimudzirwa mukurumbira nyaya, ukama uye hupenyu hwehupenyu.
Hungu, munhu wose anoziva nezvekufamba kwake, kutsika uye nzira inoita kuti ave mumwe wevatambi vemutambo vatsva muEngland. Zvisinei, vashomanana chete vanofunga nezveDhemarai Gray's Biography iyo inonakidza chaizvo. Iye zvino pasina kunze kwekudaro, ngatitangei.
Demarai Grey Childhood Story Plus Untold Biography Facts- Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Demarai Remelle Grey akazvarwa pa 28th musi waJune 1996 kusvika Birmingham, United Kingdom. Grey inobva kwaari Jamaica kuvonga vabereki vake vakananga nemaJacican midzi. Izvi zvinoreva kuti akafanana nenguva yekunyora achiri kukodzera kutamba kuJamaica.
Dhemarai Grey inobva mumhuri yepakati-kati yemhuri nemutauro weBrithani Jamaican iyo haisi yakasiyana zvikuru neyeyo yakatarwa nevamwe vaBritain Jamaican vakaita se; Daniel Sturridge, Theo Walcott, Alex Oxlade-Chamberlain, Raheem Sterling, Kyle Walker, Danny Rose uye Chris Smalling.
Dzvadzi Grey - Chikwereti ku Twitter
Achikura pamwe nehanzvadzi yake, Grey akaenda kuFrankley High School apo akatanga kutamba nhandare yemakwikwi ayo akawedzera shure kwemaawa. Mabasa epamberi yebhora akabhadhara zvikamu sezvo zvaitungamirira kumabasa.
Demarai Grey Childhood Story Plus Untold Biography Facts- Basa Rokutanga Upenyu
Pasati nguva yake naFrankley High School, Demarai Gray akatanga kutamba neboka rake rekuyaruka yekambani, Cadbury Athletic's junior team. Akaita chirevo nekambani yakatungamirira kwaari kuti akunde mukana wokudzidzira neBirmingham Academy.
Grey akabatana neBlues 'academy se-under-11. Pasi pemutsara, akasangana ndokuva shamwari Nathan Redmond uyo waimboona sokuti ndiyo yakakosha zvikuru pamabasa ake evechidiki.
Demarai Grey's career yakatanga kushamwaridzana naNatan Redmond. Chikwereti kune Pinterest uye Birmingham Post.
Demarai Grey Childhood Story Plus Untold Biography Facts- Mugwagwa Unoenda Mukurumbira
Iko kunofadza, kwakadzikama uye kufara Grey akaenderera mberi nebhasikoro yake yebhora kusvikira 2012. Basa rake munguva inotevera (2013-2014) yakamupa chikamu cheClass Academy Player yeChirungu.
Demarai Grey Mugwagwa Unoenda Mukurumbira (Chikwereti kune BBC)
Nenguva iyo yakaonawo Grey achikwidziridzwa kumutsara wekutanga weBirmingham kwaakatanga kukwikwidzana kuti ave nguva yekutanga.
Demarai Grey Childhood Story Plus Untold Biography Facts- Simuka Mukurumbira
Paaiva muchechi yekutanga yeBirmingham, Grey akatanga kukwikwidzana kwekutanga kwechikwata chekutanga neveimbova United rejectee Federico Macheda. Yaiva makwikwi ane utano akaona Grey achibuda uye achiita Macheda achibva mubhuka.
Iyi yakanga iri nguva yekambani yeBirmingham yaive nekutenda kuti akanga achikurisa kukura. Grey akaputsa zvinyorwa munguva inotevera 2014-2015 iyo yakamuona achikunda matanhatu matatu anoti; Football League Young Player mumwedzi waDecember 2014, Birmingham City Goal uye mutambi we 2014-2015 Season.
Grey's clinic kugumisa uye kukwanisa kuvhara muzvidziviriro hazvina kuonekwa zvisingazivikanwi neIt Premier League trophy vatengesi veLeicester City avo vakabvisa chikamu chake chekubudisa. Grey akabatana nemakwikwi eLigi muChNUMXth yaJanuary 4 uye akabatsira vashandi vake kuti vatsigire Premier League yavo korona.
Demarai Grey Anosangana naVa Premier League Holders (Chikwereti kuna PremierLeague)
Vamwe vose, sezvavanotaura nhoroondo.
Demarai Grey Childhood Story Plus Untold Biography Facts- Ukama Hupenyu
Ndiani ari Demarai Grey Dating?
Demarai Grey's Girlfriend- Mashoko Asingazivikanwi (Chikwereti ku Instagram)
Izvo zvingangove zvakavanzika zvingave zvakavanzika zveGrey ndeimwe iyo inopukunyuka kuongororwa kweziso revanhu nekuda kwekuti rudo rwake rwehupenyu huri pachedu uye zvichida kutamba-pasina. Grey sezvakaita panguva yekunyora yakasarudza kusaudza vanhu nezvehupenyu hwehukama hwavo.
Akambopa chikumbiro chekubvunzurudza kuti apindure mubvunzo pamusoro pemudzimai wake zvinhu. Pasi pane svondo rehurukuro.
Zuva Rokuparadza Dema Rakaidza Rufu:
Waizviziva here? Demarai Grey akambonyengedza rufu mushure mokunge avhara nechesi ye helikopta pairi kuenda kuLeicester City PAAwards.
Zuva raDhemarai Grey Rinofurirwa Rufu (Chikwereti kune FameFlynet.uk.com)
Pamusana pemasimba emhepo yemhepo, British Britain yakadzingwa sezvo iye akapotsa achifamba kupinda mumakumbo emakumbo emakumbo. Kupindira nokukurumidza kwevashandi veHelicopter vakabatsira mukudzivirira njodzi inouraya. Tarisa chiitiko chevhidhiyo.
Akambofambisa Lethal Hippy Crack:
Chiitiko icho chakaitika mushure mekunge Leicester Premier League ikundwa ku Everton. Yakanga iri nguva iyo Birmingham akaberekwa nemujaho wechechi akazvienzanisa achiita kuti inhaling inouraya nitrous oxide, inozivikanwa se 'hippy crack'.
Demarai Grey mafilimu pachake ari kufambisa Hippy Crack (Credit to girazi)
Grey mushure mekugadzirisa zvinhu izvi zvakasarudza kuisa vhidhiyo yevhidhiyo pane yake Snapchat.
Kunyange zvakadaro, zviri pamutemo kuti zvikwire KUMASHURE eBritish anti-drug agencies akanyevera kuti kuisa gesi kunoderedza uropi hwemhepo yakakosha uye inogona kuuraya.
Munhu Anokonzerwa Nezvakawanda:
Kusvika pakuziva mararamiro aDararai Grey kubva panzvimbo iyi zvechokwadi anobatsira kuvaka mufananidzo wakakwana wake.
Maererano girazi, Premiership uyo anonzi Demarai Grey akapemberera musoro wake weNew Premier League ne Black Lambo.
Haasi muchengeti wemutambo anogara muLavish Lifestyle zvinonzwisisika nemaoko mashomanana akanaka ekupfumisa motokari uye duplexes.
Demarai Grey Childhood Story Plus Untold Biography Facts- Upenyu hwehupenyu
Kunyangwe iwe unofanira kunge wakaverenga pamusoro pekukanganisa kwake uye helicopter kuchengetedza kukanganisa. Asi kusvika pakuziva hupenyu hwaDhemarai Grey huchakubatsira kuti uwane mufananidzo wakazara wake. Tisati taenda, regai tibvunze mubvunzo.
Ndeupi rudzi rwehuno hunouya mupfungwa dzako kana iwe uchifunga nezvemazuva ano unyanzvi webhola?
Unogona kufunga nezvehupenyu hunopisa. Asi Dhemarai Grey munhu ane ushamwari-ane mwoyo unoda kuisa nguva yake nemari pakuita kuti nyika ive nzvimbo yakanaka.
Unhu hweDhemarai Grey (Credit to Instagram)
Grey rave richinyanya kubatanidzwa mubasa rekuda. Ari mumwe wevaya vanokweretesa mari yezvipatara zvevana uye vanoda kushanyira vanorwara. Inongova nyaya yenguva isati yauya musangano weUNICEF UK.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nokuverenga Dhemarai Grey Childhood Story pamwe neSepold Biography Facts. At LifeBogger, isu tinoedza kururamisira uye kusaruramisira. Kana ukawana chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka, tapota shandisa nesu nekupindura pasi apa. Tichagara tichikoshesa uye tichiremekedza pfungwa dzako.